Fanatsarana ny tahan'ny fiovam-po: Torolàlana 9-dingana hampitomboana ny tahan'ny fiovam-po | Martech Zone
Amin'ny maha mpivarotra antsika dia matetika mandany fotoana hamokarana fampielezan-kevitra vaovao izahay, fa tsy manao asa tsara foana mijery fitaratra manandrana manatsara ny fampielezan-kevitra sy ny fizotra ataonay amin'ny Internet. Ny sasany amin'ireny dia mety hoe mampitolagaga fotsiny… manomboka aiza ianao? Misy fomba fiasa ho an'ny fanatsarana ny tahan'ny fiovam-po (Cro)? Eny eny… misy.
Ny ekipa ao Manam-pahaizana momba ny tahan'ny fiovam-po dia manana ny Metodôma CRE anazaran'izy ireo ity sary ity niarahan'izy ireo niaraka tamin'ny ekipa tao amin'ny KISSmetrics. Ny antsipiriany infographic 9 dingana mankany amin'ny tahan'ny fiovam-po tsara kokoa.
Dingana tokony hanatsarana ny tahan'ny fiovam-po
Fantaro ny fitsipiky ny lalao - mampivoatra ny Paikady CRO, tanjona lavitra, ary ny fomba handrefesanao ny fahombiazanao. Atombohy ao an-tsainao ireo mpitsidika anao ary mandehana amin'ireo dingana tsirairay tsy maintsy raisin'izy ireo hivadika mpanjifa. Aza maminavina!
Fantaro sy loharanom-pifamoivoizana misy - mamolavola fomba fijery amin'ny vorona-maso ny fanananao nomerika ary alao sary an-tsaina ny anao tandroka fivarotana, avy aiza ireo mpitsidika, izay pejy fidinana tonga amin'izy ireo, ary ny fomba fitetezany ny tranokalanao. Fantaro ireo faritra izay manana fotoana lehibe indrindra azo hatsaraina.
Fantaro ireo mpitsidika anao (indrindra ireo tsy miova fo) - Aza maminavina - fantaro hoe maninona ireo mpitsidika anao no tsy miova amin'ny fahatakarana ireo karazana mpitsidika sy fikasana samihafa, mamantatra ireo olan'ny traikefan'ny mpampiasa, ary manangona sy mahatakatra ny fanoheran'ny mpitsidika.
Halalino ny toeranao - Halalino ireo mpifaninana aminao, mpifaninana aminao, manam-pahaizana momba ny indostria, ary izay lazain'ny mpanjifanao amin'ny media sosialy sy amin'ny tranokala fanamarihana. Avy eo, zahao ireo fahafaha-manatsara ny toerana misy anao amin'ny alàlan'ny fananganana ny tanjaky ny orinasanao.
Asehoy ny harena nafenina ao amin'ny orinasanao - Fantaro ny lafiny inona amin'ny orinasanao no maharesy lahatra indrindra an'ireo mety ho mpanjifa, asehoy ireo fananana ireo amin'ny fotoana mety amin'ny fizotrany fividianana, ary apetraho ny fotoana hahazoana, fanangonana ary fampisehoana ireo fananana ireo.
Mamorona paikady fanandramana - Raiso daholo ny hevitra novokarinao tamin'ny fikarohana nataonao ary ataovy izay laharam-pahamehana ho an'ireo izay lehibe sy sahy ary kendrena hampandroso ny orinasanao ao anatin'ny fotoana fohy. Manome tombony bebe kokoa anao ny fanovana mahery vaika ary hahazo tombony haingana kokoa ianao.
Mamolavola ny pejinao fanandramana - Famolavolana sy famolavolana tarehin'ny traikefan'ny mpampiasa vaovao izay maharesy lahatra, azo inoana ary mora raisin'ny mpampiasa. Manaova fanandramana fampiasana maro amin'ny tariby tariby ary ifanakalozy hevitra amin'izy ireo na iza na iza izay manana fahatakarana fangoraham-po amin'ireo mpanjifanao.
Mitondrà fanandramana eo amin'ny tranonkalanao - Manaova andrana A / B amin'ny andrana andranao. Araho ny fomba fiasa izay ahazoan'ny mpikambana ao amin'ny ekipa mahatakatra ny atao hoe andrana, ny antony itondranao azy, ny fomba fampidirany ao amin'ilay tranokala, ny fifandraisany amin'ny tanjon'ny orinasa, ary ny fomba handrefesanao ny fahombiazanao. Ny rindrambaiko fitiliana A / B dia afaka manisa, miaraka amin'ny maha-marina ny statistika, izay kinova miteraka fiovam-po bebe kokoa.
Alefaso any amin'ny haino aman-jery hafa ny fampielezan-kevitra mandresy anao - Zahao ny fomba azo ampiharana ny fomba fijery amin'ny andrana mandresy amin'ny faritra hafa amin'ny fantsom-barotra! Azo zaraina ny lohateny, azo zaraina amin'ny haino aman-jery ivelan'ny Internet ny fandresena an-tserasera, ary aparitaho amin'ireo mpiara-miasa aminao mba hahafahan'izy ireo manatsara ny fampielezan-kevitr'izy ireo.
Momba ny Kissmetrics
Ny Kissmetrics dia ahafahan'ny mpivarotra manao ny Customer Engagement Automation (CEA) amin'ny alàlan'ny fanampiana azy ireo hamakafaka, hampisaraka ary hikambana amin'ny toerana iray miaraka amin'ny tatitra mora vakiana sy ny fampifanarahana mpampiasa mahafinaritra.
Mangataha Demo Kissmetrics
Tags: fanavaozana fiovam-pomanam-pahaizana momba ny tahan'ny fiovam-pofanatsarana ny tahan'ny fiovam-podingana fanatsarana ny tahan'ny fiovam-popaikady fanatsarana ny tahan'ny fiovam-pometodolojia creCropaikady crokissmetrics
Apr 17, 2021 amin'ny 3: 23 AM
Lahatsoratra mahafinaritra! Ny torolalana amin'ny dingana sivy etsy ambony dia tokony hanome anao fototra handrafetana ny singa tsirairay amin'ny pejin-drindrina, mitarika ho amin'ny fiovam-po fanatsarana.